प्रसिद्ध रूसी कवि, लेखक र playwright ए एस Pushkina द्वारा लिखित अलि दुःखद घटना, - "Mozart र Salieri", जो एक विधा को उत्पादन। लेखक 1826 मा नयाँ प्ले को लेखन गर्भधारण, तर आफ्नो जीवनको सबैभन्दा उत्पादक अवधिमा यो गरे - तथाकथित boldins समयमा। प्ले तुरुन्तै Salieri आफ्नो मित्र Mozart हत्या रचनाकार बारेमा सबैभन्दा दृढ स्थापित मिथक एक वृद्धि दिने, 1831 मा प्रकाशित भएको थियो। नाटक पाठ Rimsky-Korsakov द्वारा ओपेरा को libretto, साथै फिलिम लिपि लागि आधार थियो।
प्ले "Mozart र Salieri", लेखक को अन्य काम संग तुलना केही विशिष्टता विशेषता छ जो एक विधा, आफ्ना मित्रहरूको प्रमाण र आफ्ना समकालीनहरूको केही लेखिएका छन् जो आफ्नो प्रकाशन, अघि पाँच वर्ष मा तयार भएको थियो। तर कवि त यसको प्रकाशन संग हतार छैन, आधिकारिक आलोचना डराएका थिए। उहाँले पनि त्यो अनुवाद गरेको छ विदेशी काम बाहिर इशारा, गुमनाम आफ्नो नयाँ काम प्रकाशित वा तिनीहरूको ग्रन्थकारिता लुकाउन खोजे। टुकडा आफ्नो अघिल्लो प्रमुख ऐतिहासिक नाटक "बोरिस Godunov" को बलियो प्रभाव अन्तर्गत लेखिएको छ।
उनको Pushkin काम गर्दा अन्य देशहरूमा ऐतिहासिक एपिसोड बारेमा नाटकहरु एक श्रृंखला लेख्न चाहन्थे। र पहिलो मामला मा भने उहाँले विलियम शेक्सपियर को काम प्रेरित थियो, तर यो समय त्यो फ्रान्सेली लेखक को नाटक को एक नमूना लिए जीन रासिन, प्लट र शैली को अनुरूप को मामला मा मनपरेको गर्ने।
Pushkin को सबै भन्दा प्रसिद्ध काम एक प्ले "Mozart र Salieri" थियो। यो जस्तै साहित्य मा अवस्थित जो तथाकथित सानो विपत्ति आइलाग्यो, एक चक्र को भाग हो, तर जो त्यहाँ मात्र चार थिए नयाँ काम, लागि विशेष लेखक द्वारा विकसित गरिएको छ रूपमा यो नाटक को विधा, धेरै विशिष्ट छ। एक विधा को काम को मुख्य विशिष्ठ सुविधाहरू - प्लट को एक जानिजानि सरलता। यो प्ले मा - वर्ण मात्र दुई (एक प्रसङ्ग देखा गर्ने अन्धा violinist गणना छैन)।
प्ले सम्पूर्ण संरचना - यो तैपनि पूर्णतया आफ्नो वर्ण प्रकट जसमा monologues र संवादलाई छ। अक्षरहरू ध्यान निर्धारित मनोविज्ञान फरक संरचना "Mozart र Salieri" छ। विधा यसको पार्थक्य परिभाषित खेल: कार्य रंग उज्जवल देखिन्छ जो एक संलग्न ठाउँ, मा ठाँउ लिन्छ, र इतिहास को नाटक जोड दिन्छ। Finale एकदम आषा काम गर्दछ: षड्यन्त्र को मामला मा षड्यन्त्र व्यावहारिक अवस्थित छ। मुख्य जटिलता - को हीरो को भित्री संसारको एक प्रदर्शन, आफ्नो व्यवहार र मनसाय व्याख्या गर्ने प्रयास।
धेरै सरल, तर एकै समयमा धनी शब्दावली नाटक अलग "Mozart र Salieri"। Pushkin जटिल साहित्यिक क्रांतियों आफ्नो पहिले दुःखद घटना लेख्दा गर्दा शेक्सपियर अनुकरण गर्न resorted इन्कार गरे। अब उहाँले रासिन को सजिलो, मनोरम भाषा रुचि थियो। उहाँले पाठक गर्न खोजे (वा चरण को दर्शक) को संघर्ष र टकराव वर्ण को सार देखि विचलित छैन।
त्यसैले तिनले जानाजानी कहानी को स्कोप संकुचित र संवादलाई र monologues अधिकतम brevity खोजे। साँच्चै, एकैचोटि दुई नायक ठीक र सही आफ्नो मनसाय र जीवनको उद्देश्य राज्य, स्पष्ट यसको उपस्थिति को पहिलो देखि धेरै स्पष्ट हुन्छन्। सायद यो सानो विपत्ति आइलाग्यो को lexicon मा disarming सादगी गर्न लेखक को विशेष उज्ज्वल प्रतिभा छ। यो पाठक गरेको नाटक "Mozart र Salieri" आकर्षित गर्छ। Pushkin सकेसम्म सुलभ भएको द्वन्द्व को अर्थमा बनाउन, त्यसैले पाठक विचलित हुन सक्छ केहि जोगिन चाहन्थे। तर, यो केही वर्ण शान को devoid छ: बोली, यो तैपनि मेलोडिक ध्वनि र धेरै व्यवस्थित अनुमानित गर्न। वर्तमान काम यो singularity विशेष गरी जीवन्त प्रकट भएको छ किनभने यसको protagonist दुई - रचनाकार, बौद्धिक श्रम को मान्छे, स्वाद परिष्कृत गर्ने।
सबै भन्दा प्रसिद्ध लेखकहरू र कवि को एक Pushkin छ। "Mozart र Salieri" (छोटो प्ले सामग्री स्पष्ट सादगी भिन्न र बुझ्न सजिलो) - यसलाई आफ्नो नाटकीय र जटिल मनोवैज्ञानिक कथा लागि रोचक छ जो एक नाटक, छ। सुरु खोल्छ आफ्नो भक्ति र प्रेम संगीत बताइएको गर्ने स्वगत Salieri, र उहाँले तिनलाई अध्ययनको लागि बनाएको छ कि प्रयासमा सम्झन्छन्।
उहाँले आफ्नो डाह व्यक्त एकै समयमा सजिलो र virtuosity संग प्रतिभा को काम composes गर्ने Mozart, गर्न (खैर, यो प्ले नाम को ड्राफ्ट को एक के थियो छ)। आफ्नो योजना को खुलासा गर्न समर्पित गर्ने स्वगत को दोस्रो भाग: रचनाकार आफ्नो मित्र, यो आफ्नो प्रतिभा squandering व्यर्थमा छ र सदुपयोग गर्न पत्ता लगाउन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई द्वारा निर्देशित विष निर्णय गरे।
नायक को पहिलो कुरा
छोटो काम कुनै अन्य जस्तै उहाँले मनोवैज्ञानिक अनुभव Pushkin को गहिराई व्यक्त गर्न सक्छ। "Mozart र Salieri" (प्ले छोटो सामग्री कि सबै भन्दा राम्रो प्रमाण हो) - यसलाई आफ्नो चासो र जीवन लक्ष्य सामना गर्दै जो दुई वर्ण, बीचको मौखिक Duel छ। तथापि, स्पष्टतः तिनीहरूले धेरै अनुकूल संवाद, तर हरेक वाक्य तिनीहरूले विभिन्न मान्छे हो कसरी प्रमाणित गर्छ भनेर लेखक आफ्नो बोली निर्माण गरेको छ, र दुई बीच कसरी आपसी मतभिन्नता र बेमेलका अन्तर्विरोध। यसलाई आफ्नो पहिलो कुराकानीमा पहिले नै पाइन्छ।
"Mozart र Salieri" को विषय सायद सबै भन्दा राम्रो तुरुन्तै सजिलै र स्वाभाविक आफ्नो स्वभाव देखाउनुहुन्छ कि दृश्य मा पहिलो उद्भव मा प्रकट गरिएको छ। यसलाई आफ्नो संरचना र यसको त्रुटि संगीतकार गरिब amused खराब खेल्छ जो अन्धो violinist गर्न जान्छ। Salieri किनभने आफ्नो मित्र आफ्नै प्रतिभा संगीत को आनन्द बनाउँछ भन्ने तथ्यलाई को रिस उठ्दैन छ।
अक्षरहरू को दोस्रो बैठक
यो कुराकानी पूर्ण छ जम समाधान संगीतकार आफ्नो मित्र विष। उहाँले विष लिन्छ र जहाँ तिनीहरू खाने सँगै छ सहमत थिए रेस्टुरा जान्छ। दुई बीच त्यहाँ अन्त रेकर्ड सीधा म राख्दछ कि एक संवाद फेरि छ। त्यसैले laconic कार्य सबै साना Pushkin गरेको दुःखद घटना फरक। "Mozart र Salieri" - कुनै अपवाद थियो कि एक नाटक। यो दोस्रो कुराकानी रचयिता कहानी मा एक केन्द्रिय स्थान ओगटेको छ। यो साँझ समयमा सीधा आफ्नो महत्त्वपूर्ण चासो र मनसाय सामना।
Mozart साँचो प्रतिभा दुष्ट गर्न सक्नुहुन्छ छैन, कि र आफ्नो साथी, यो सोचाइले प्रहार हुनत अझै पनि अन्त गर्न आफ्नो विचार दिन्छ भने। यस मामला मा, पाठक Mozart बर्बाद छ देख्नुहुन्छ। Pushkin त्यसैले यो कुनै पनि शङ्का छोड्न गर्दैन, आफ्नो काम गर्छ। उहाँले यो नाटक गर्न नेतृत्व पहिलो स्थानमा रुचि छ।
मुख्य पात्र को छवि
शोकमा "Mozart र Salieri" यी मानिसहरू को मनोवैज्ञानिक टकराव को मामला मा रोचक छ। पहिलो अक्षर धेरै सरल र सीधा छ। यसलाई आफ्नो मित्र उहाँलाई डाह छ भन्ने विचार आउनु भएन। तर कला साँचो प्रतिभा जस्तै त्यो के हो र भन्छ, सुझाव छ कि यो छिट्टै समाप्त हुनेछ एक असामान्य फ्लेयर छ। Mozart आफ्नो Requiem आदेश गर्ने, र पछि त अब देखा एक अनौठो ग्राहक बारेमा Salieri कथा बताउँछ।
तब देखि, रचनाकार उहाँले एक requiem मास नै लेखेका लाग्यो। यो निकै छोटो कथामा महसुस गर्दैन त्यो बिल्कुल यो कसरी हुन्छ छ तापनि, आफ्नो आसन्न अन्त को एक भबिष्यको आभास महसुस गरे।
Salieri को छवि
यो संगीतकार, त्यसको विपरीत, अझ कटिबद्ध बाहिर आफ्नो दुष्ट योजना पूरा गर्न। यो उहाँले Requiem देखि Mozart अंशहरूको प्ले गर्दा विशेष गरी दृश्य साँचो हो। यो हाल प्ले मा मजबूत को छ। यो प्रसङ्ग मा, Mozart फेरि एउटा संगीत प्रतिभा र Salieri रूपमा पाठक देखिन्छ - दुष्ट को personification रूपमा। तसर्थ, लेखक यी दुई अवधारणाहरु प्रत्येक अन्य नमिल्ने हो कि आफ्नो विचार देखाउनुभयो।
"Mozart र Salieri" को उत्पादन - यो किनभने यो भन्दा पूर्णतया ठूलो संगीतकार र आफ्नो डाही मा embodied राम्रो र खराब बीच टकराव को समस्या, व्यक्त गरिएको छ, सानो विपत्ति आइलाग्यो को चक्र मा सबै भन्दा दार्शनिक काम हो। साँचो रचनात्मकता यी दुई विरोध सिद्धान्तहरू बीच संघर्ष को एक रंगशालामा हुन्छ, यो अब ठीक छ: Pushkin पूर्ण आफ्नो विचार embody वर्णको भेटिएन। त्यसैले, यो नाटक एक अस्तित्व अर्थ छ। लेखक अगाडि राख्नु वर्तमान काम जीवन को अर्थ छ र षड्यन्त्र लेखकले को विचार बन्द सेट समर्थन भूमिका खेल्छ भन्ने एउटा दार्शनिक विचार सामने गर्न: र विचार अन्तर्गत चक्रको अन्य कामहरू यस प्ले मा मुख्य विचार उत्प्रेरित गर्छ जो पर्याप्त गतिशील षड्यन्त्र, यदि विपरीत छ।
नाटक एक सारांश: Lermontov "बहाना घूम्छ"
को Kalashnikov र Kiribeevicha को तुलनात्मक विशेषताहरु। मान्छे र सरकार टकराव को
सन्तान गर्न पुर्खाहरूको देखि परिवार Pushkin
यो assonance कस्तो अर्थ राख्छ? Assonance: साहित्य मा उदाहरणहरू
सुन्न यदि कस्तो चिसो पछि?
मार्सेइल: मान को नाम (तीन संस्करण)
श्रृंखला निचोड - साइकिल मर्मत गर्न अपरिहार्य प्रमुख
इतिहासको वर्णक्रम देखि लेखएको इतिहास - यो छ ... को Annales स्कूल को मूल्य
कर कटौती के हो
Cantilena - यो ... संगीत के Cantilena?
दबाइ "sofosbuvir": प्रयोगको लागि निर्देशन, कार्य को संयन्त्र, analogs